भिडियो – Sapana Sanjal
Aug212021 by AdminNo Comments
रामकुमारी झाक्रीले कुन हकले माधव नेपालको हात समातेर ता,नेको, खुल्यो कसैले नसोचेको ड,रलाग्दो रहस्य – भिडियो सहित
Sapana Sanjal : विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा नेता रामकुमारी झाँक्रीको प्रस्तुति विशेष नै हुने गर्छ । कुनै न कुनै फरक काम गरेर उनले चर्चा कमाउने गरेकी छन् । यसै क्रममा बुधबार एमाले विभाजन गरी बनाइएको नेकपा एमाले (समाजवादी) दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा जाँदा पनि नेता झाँक्रीको एउटा तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगको परिसरमा खिचिएको त्यो तस्बिरमा नेता झाँक्रीले आफ्ना वरिष्ठ नेता माधव नेपालको हात समा,तेर तानि,रहेको देखिन्छ । जसलाई कतिपय लेखक, पत्रकार, सम्पादकले समेत पहिलो पुस्तामा युवा पुस्ताको ह,स्तक्षेपका रूपमा अर्थ्या,एका छन् र, नेता झाँक्रीको भूमिका र साह,सको प्रशंसा गरेका छन् । यही फोटो भाइरल भएपछी वक्ता सागर थापाले आफ्नो बिचार राखेका छन । हेरौ भिडियो https://youtu.be/uutLu6W7HoA
Jul302021 by AdminNo Comments
बाहुन क्षेत्रिले नै बनाए सार्किको छोरिलाई मन्दिरको मुख्य पुजारी , हेर्नुहोस्
Sapana Sanjal : दलित समुदायकि एक महिला माता ऋतु नेपाली यश मंदिरको मुख्य पुजारी बन्नुभएको छ । यस मन्दिरको मुख्य पुजारी भएरै उहाले पुजा पाठ गर्दै आएको लगभक दुई बर्ष पुगिसकेको छ । उहाँ सार्किको छोरी हुनुहुन्छ । यश मंदिरमा अनेक थरि र जातजातिका व्यक्तिहरु आउनुहुन्छ र माता ऋतु नेपालिको हातबाट प्रसाद ग्रहण गर्नुहुन्छ र उहाको पाउमा परेर दर्शन गर्नुहुन्छ ।जुनै जातको होस् माताको पाउमै सबैजना पर्दछन् । साचै नै यसरी सम्भव हुन्छ परिवर्तन । सबैको र गत रातो हुने र एउटा तल्लो जातको अर्को माथिल्लो जातको भन्दै आखिर के का लागि भेदभाव र कस्का लागि भेदभाव । निश्चय पनि परिवर्तन स्वयमबाट नै सम्भव हुने हो । जातियताको नाममा राजनीति गर्नेहरुले यी यस्ता उदाहरणहरु हेर्न अति आवश्यक छ । समाज यसरी परिवर्तन हुदैछ भन्ने कुरा सबैले नै देख्नु पर्छ । हेर्नुहोस् तलको भिडियोमा https://youtu.be/iRPXvxJ8w70
Jul292021 by AdminNo Comments
सामाजिक सञ्जालमा धरानकी एक सुन्दर युवतीको फिगरको निकै चर्चा, फम लगायो हो ? भन्नेहरुलाई दीईन कडा जवाफ
Sapana Sanjal : धरानकी एक जना सुन्दर युवती । सामाजिक सञ्जालमा उनको फिगरको निकै चर्चा छ । उनी सामाजिक सञ्जालमा निकै सकृय छन् । सामाजिक सञ्जाल अहिले धेरै युवायुवतीका लागि अपरिहार्य साधन भएको छ । समय विताउन सामाजिक सञ्जाल एउटा सजिलो माध्यम भएको छ । कतिपय युवायुवती एकाएक भाइरल र चर्चित हुने गरेका छन् । त्यस्तै यि धरानका युवती पनि एक हुन् । सामाजिक सञ्जालले उनलाई निकै चर्चित बनायो । उनको फिगरले धेरैलाई लोभ्याएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक टिप्पणी आउने गरेको भन्दै उनले आलोचना गर्नेहरुलाई आफुले कुनै वास्ता नगर्ने बताउँछिन् । उनी राम्रो कलाकार बन्न चाहन्छिन् । मलाई धेरैले फर्म लगाएको हो भन्छन्, मेरो नेचुरल फिगरलाई फर्म लगाएको हो भन्दा चित्त दुख्छ नी उनले भनिन् । कसैले तिम्रो परिवारमा बुवा आमा छैनन् किन यस्तो भिडियो हाल्छौ ? भनेर पनि लेख्छन् उनले अगाडी भनिन् मलाई यस्ता
Sapana Sanjal : आफुलाई मेमोरी किङको दा,वी गर्ने कालिकोट घर भएका विजय शाहीको मृ,त्यु भएको ह,ल्ला गर्ने पहिलो ब्यक्ति हुन् उनका गूरु भनिने दिपक बहादुर शाही । उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत विजयको अस्पताल लैजाँदा लैजाँदै नि,धन भयो भन्दै सम,वेदना दिए । त्यस पछि ज्वाला संग्रौला र मुकुन्द घिमिरेले पनि शाहीको फोटो सहित फेसबुकमा समबे,दना दिंदै फेसबुकका न्या,यधिषलाई दोष थोपरे । यति भए पछि सामाजिक सञ्जालमा विजय शाहीको निध,नको खवरले आ,तंक नै मच्चियो । फ्यान फलोयर्सको फुई लगाउनेहरुले सत्य तथ्य के हो नबुझी अन्ट सन्ट पोष्ट गर्दा सुत्न लागेकाहरुमा त्रा,स फैलियो । सामाजिक सञ्जालमा राम्रा र सकारात्मक समाचार खासै चासो र रुचि नराख्नेहरु पनि यस्ता अविश्व,सनिय र भ्र,म,पुर्ण समाचारको पछि लाग्ने गर्दछन् । विजय शाही फे,क हुन कि रियल मेमोरी किङ नै हुन तर उनलाई जिउदै मा,र्ने प्रयास गर्नु राम्रो हुँदै होइन । बिजय शाहीको
यस्तो अबस्थामा पनि छमछमी नाचेर टिकटक भिडियो बनाएपछि गा-लिको ओईरो (भिडियो हेर्नुस्)
Sapana Sanjal : यस्तो अबस्थामा पनि छमछमी नाचेर टिकटक भिडियो बनाएपछि गा-लिको ओईरो (भिडियो हेर्नुस्) । पछिल्लो समय टिकटकमा अपलोड भएको एक भिडियोले टिकटक संजाल निकै ता-तेको छ । प्रयोगकर्ता सिद्दार्थथापा पंगेनी नामक टिकटक आईडिबाट अपलोड भएको उक्त भिडियोले सामाजिक संजाल टिकटक त-ताएको हो । सेतो धोती र गन्जीमा नाचेको देखिने उक्त भिडियोको बारेमा बास्तबिकता नखुलेपनि उक्त भिडियोको कम्मेन्टमा गा-लिको ओईरो लागेको छ । हेर्नुहाेस् भिडियाे:- https://youtu.be/PP8TFL6vwNQ याे पनि, स्याउको बियाँ र बोक्रा खानुका यति धेरै अचुक फाइदाहरु, त्यसैले सबैले खानै पर्छ ! स्याउ स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक हुने गर्दछ । यसको सेवन प्राय मानिहरुले गरेका हुन्छन् । हामीलाई स्वास्थ्य राख्ने फलफुलमा निकै लाभदायक मानिएको स्याउको फाईदाहरुको बारेमा धेरैलाई थाहा नै छ । कतिपयले स्याउको बोक्रा र
संगै बाच्ने संगै धर्ति छो’ड्ने भन्दै टिकटक बनाएका दाम्पत्यको एकै साथ मृत्यु
Sapana Sanjal : झापा – पूर्णबहादुर विष्ट आफ्नी पत्नी भीमा विष्टसँग धनकुटाको भेडेटारबाट फर्किने क्रममा थिए । इटहरी आइपुग्दा बेलुका भइसकेको थियो। त्यसैले घरमा रहेका १४ वर्षीय छोरालाई फोन गरे खाना खाँदै गर्नु हामी यतै खाएर आउँछौँ भने । उनीहरुका छोराले हुन्छ भनेपछि फोन राखे । इटहरीको एक होटलमा खाना खाएर मोटरसाइकलमा घरतिर लागेका उनीहरू घर पुग्न पाएनन् ।दमक नगरपालिका ४ स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा सिमेन्टले भरिएको मालबाहक ना ४ ख ८७३० नम्बरको ट्रकले पूर्ण र भीमा सवार प्रदेश २ ०३ ०१३ प ४७८७ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठ क्क र दि यो । ट्रकको ठ’क्क रबाट ग’म्भी र घाइते उनीहरूलाई उपचारको लागि दमकस्थित लाइफलाइन अस्पतालमा पुर्याइयो । तर त्यहाँ दुवै जनालाई चिकित्सकले मृ त घोषणा गरेका थिए ।‘ सम्भवतः उहाँहरूको घट ना स्थ लमै मृ त्यु भएको हुनुपर्छ’, इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका डिएसपी नवराज कार्कीले भने, ‘घरम
Sapana Sanjal : साउनको महिना भगवान शिवको वर्त वस्ने पवित्र महिना हो । भगवान शिवको पुजा र ब्रतको लागि कतिपय भक्तहरु निकै कठोर नियम पालना गर्छन । बाँकेको नरैनापुर ५ मा सन्तानेश्वर महादेवको मन्दिर छ । त्यहाँ अहिले पर्यटकिय हिसावले पनि निकै चहल पहल हुने गरेको छ । बाँके जिल्लामा एक जना महिला पानी पनि नखाएर सोमवारको व्रत बसेकी थिइन् । उनी व्रत बसेर माथि डाँडामा रहेको शिव मन्दिरमा गएकी थिइन् । तर पछि ति महिलालाई यस्तो भयो की ४ जनाले स्ट्रेचर बनाएर बोकेर ल्याए । साउने महिनामा ब्रत बसेर पानी नखाएर भोकै शिव मन्दिरमा दर्शन गर्न पुगेकी ति महिलाको निधन भएको छ । शारिरीक रुपमा अलि मोटो देखिने ति महिला सबैको अगाडी छटपटाउन थालिन् । उनलाई बचाउन धेरैले कोशिष गरे । नरैनापुर ५ मा भएको यो घटनाले भोकै बसेर मन्दिर दर्शन गरेकै कारण निधन भएको हो की अथवा अन्य केही कारणले निधन भएको हो भन्ने खुलेको छैन । नरैनापु
Jul252021 by AdminNo Comments
विजय शाहीले ९०० बिद्यार्थीबाट ४५ लाख उठाएर ठ,गेको अर्को प्रमाण भेटियो,फोन गर्दा यस्तो ल,फडा हेर्नुहोस भिडियो
Sapana Sanjal : पछिल्लो समय “मोमेरी किङ्ग” भनेर चिनिएका वि’जय शाही अहिले मि’डियामा आएका छन्। दुर्गम गाउमा जन्मेका विजय शाहीको प्रतिभा देखेर धेरै मानिसहरु अचम्म परेका थिए। उनको यो शक्ति देखेर धेरै मानिसहरुले विभिन्न प्र’तिक्रिया दिएका थिए। धेरै मिडियाहरुमा विजय शाहीले आफ्नो प्रतिभा देखाएपछि उनि बिबादमा पनि परेका थिए। विजय शाही फेक हो , यसले सबै हेरेर भन्छ , न’हेरिकन कसले भन्न सक्छ यसरि भनेर धेरै मानिसहरुले उनलाई गालि गरेका थिए। बि’बादपछि उनि आफ्नो प्रतिभालाई मि’डियामा नदेखाउन भनि आफ्नो काम गरि रहेका थिए भन्ने हल्ला पनि आयो धेरै मिडियाले केहि कुरै नबुझी उनि सहि भएको समाचार पनि प्रसारण गरे र भाग्य न्यौपाने जस्ता अलि अलि चिनिएका पत्रकारले पनि उनको करियर उठाएर आफु भने नराम्ररी पछारिए | आज हामी उनै फ़्रड भनेर चिनिएका र अमेरिकन नागरिकले केहि समय अगाडी उनको भिडियो बनाएर सबै सत्य बाहिर ल्याएपछि अ
Sapana Sanjal : काठमाडौं। झापास्थित घरमा हुँदा एलिना चौहानलाई अपरिचित नम्बरबाट फोन आयो। “हेल्लो म संगीतकार वसन्त सापकोटा बोलेको, तपाईं गीत गाउनुहुन्छ र ?”उनलाई विश्वास नै लागेन। “बसन्त सरबाट गीत गाउनका लागि प्रस्ताव आएपछि मैले विश्वास नै गरिनँ। मैले अर्को फोनबाट कल गर्न लगाएँ। बसन्त सरले नै प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ,” एलिनाले पहिलोपटक गीतका लागि अफर आउँदाको अनुभव यसरी सुनाइन्। बसन्त सापकोटाले एकैपटक तीनवटा गीत गाउन लगाए। झापामा कभर गीत गाएर उनी चर्चामा थिइन्। कालीप्रसाद बास्काेटाको स्वरमा रहेको ‘इन्स्टाको फोटो’ मा कभर (रिप्लाई) गरिन्। जुन ७४ लाख भन्दा बढीले हेरेका छन् । कभर गीत गाएर संगीत क्षेत्रमा आएकी एलिना सुरु-सुरु आफुले कभर गर्दा संगीत क्षेत्रकै व्यक्तिहरुले कभरे, बोक्रे कलाकार भनेर हेपेकाे कुराले उनलाइ निकै दु:ख लागेको बताइन् । संगीत क्षेत्रमा अहिलो चर्चाको शिखर पुग्नको लागि आमाक
Jul212021 by AdminNo Comments
दु-र्घटना पछि गायिका टिका सानुको अवस्था यस्ताे, पलपल रोईन, आमाबुवा सम्झेर भक्कानिइन (भिडियो हेर्नुस्)
Sapana Sanjal : दु-र्घटना पछि गायिका टिका सानुको अवस्था यस्ताे, पलपल रोईन, आमाबुवा सम्झेर भक्कानिइन (भिडियो हेर्नुस्) । दु-र्घटनामा परेर बेड रेस्टमा रहेकी टिका सानु मिडियामा आएकी छिन् । शिशिर भण्डारीसँग कुरा गर्दै टिकाले आफ्नो हालको अवस्थाको बारेमा बताईन् । टिका यतिबेला आफ्नो दाई मानसिं खड्काको साथमा बसिरहेकी छिन् । आफ्नो कोठामा शौचालयको असहजताको कारण उनी दाईकोमा आएकी हुन् । एक हप्तादेखि आराम गरिरहँदा समय समयमा खुट्टाको पिडाले टिका रु-न्छिन् । एक गीतको छायाँकनको क्रममा उनको खुट्टाको ह-ड्डीमा समस्या आयो । ल-डेर उक्त समस्या भएपछि सुटिँग रोकियो र उनलाई अस्पताल लगियो । हाल टिका सानु युटुबमा गीतहरु हेर्दै र लेख्दै दिन का-टिरहेकी छिन् । आफुले खेल्छु भनेर बाचा गरेका गीतहरुमा अभिनय गर्न नपाउँदा र कामको चा-पका बिच आफुलाई यस्तो समस्या हुँदा टिका पिडामा छिन् । अब फेरी चेकअप गरेर डाक्टरको सल्लाह